Indlela ukuguqula Mov MP4 - Best Online Converters - Ungakwenza Kanjani
Amavidiyo yinto esihlangana nayo nsuku zonke. Kukhona amafomethi wefayela ahlukile kunoma yiliphi ifayela levidiyo. Amadivayisi ambalwa nezidlali zevidiyo azikwazi ukuxhasa wonke amalungiselelo. Ifomethi ye-MOV ithandwa kakhulu phakathi kwamadivayisi we-Apple.
Kodwa-ke, kuyinselele ukudlala kwamanye amapulatifomu ambalwa. Isidlali semidiya esizenzakalelayo asixhasi amafayela e-MOV. Ungaguqulela ifayela levidiyo kwenye ifomethi. Kulesi siqondisi, sizokukhombisa ukuthi ungayiguqula kanjani i-MOV ibe yi-mp4. Kunezindlela eziningi ezitholakala ku-inthanethi. Sizozama ukukunikeza izinketho ezinhle kakhulu zokutholakala kalula.
Izindlela ukuguqula Mov MP4:
Kunezindlela ezimbili ezithandwa kakhulu kwi-intanethi. Abasebenzisi bangazama amathuluzi okuguqulwa online noma isoftware yokuguqula ividiyo. Kunezinketho eziningi, futhi sizokhombisa ukukhetha kwethu okuphezulu. Nawa amathuluzi asebenza kahle kakhulu azokusiza ukuphuma.
Kunamawebhusayithi ambalwa online akwenza ukwazi ukuguqula amafayela we-MOV abe ngama-mp4 mahhala. Ukulungiswa okusheshayo kunoma ngubani ofuna ukuguqula amafayela amancane. Siyincoma kubasebenzisi abanokuxhumeka kwe-inthanethi okusheshayo. Kuzofanele ulayishe ividiyo kusuka kudivayisi yakho noma isixhumanisi sedrayivu. Iguqulwa ngokushesha, kuye ngosayizi wefayela. Lapho ukuguqulwa sekuphelile, abasebenzisi bangalanda ifayela kungakapheli imizuzu embalwa. Nazi izinyathelo zokuguqula ifayela lakho ngokushesha.
I-Freeconvert ingelinye lamagama amakhulu uma kukhulunywa ngokuguqulwa online. Isebenza ngawo wonke amafomethi wamafayela wevidiyo amakhulu.
Abasebenzisi bangahudula baphonse ividiyo yabo kwi-PC yabo. Futhi inenketho yemanuwali kulabo abafuna ukuyithola kusuka enkombeni. Ithuluzi elisebenziseka kalula elenza konke ngokuzenzekelayo.
Abasebenzisi bangaguqula ividiyo yabo ibe yi-MP4 kalula ngenqubo elula. Chofoza inkinobho ukuqala ukuguqulwa. Izotholakala uma ulayishe ividiyo epulatifomu.
Lapho inqubo yokuguqula isiqedile, ungalanda amafayela kudivayisi yakho. Kuyinqubo esheshayo neqondile yabasebenzisi.
Siyethemba ukuthi izinyathelo beziqondile, futhi ungaguqula noma yiliphi ifayela le-MOV libe yi-mp4 usebenzisa lo mhlahlandlela. Yizame namuhla bese uthola imiphumela esheshayo.
Kulesi sigaba, sizobheka ezinye izindlela zokuguqula mahhala. Amathani amanye amawebhusayithi ahlinzeka insizakalo efanayo. Lokhu kuzongeza ungqimba wokuthenga okulula kuwe. Nazi izinketho ongazisebenzisa.
Iwebhusayithi yeCloud Convert inikeza izici ezifanayo ne-freeconvert. Iwebhusayithi ine-interface yomsebenzisi emnandi okulula ukuyisebenzisa. Ungakhetha okuqukethwe kwakho kwi-PC kuthuluzi labo lokuguqula. Yizame namuhla bese uthola imiphumela emihle kakhulu. Abasebenzisi bathola nezici eziningi ezengeziwe zokufaka i-tweaking. Lokhu kukusiza ukwenza ngezifiso izilungiselelo zokuguqulwa.
I-Zamzar enye indlela efanayo naleyo esiyisho kulo mhlahlandlela. Iwebhusayithi egxile ekuguqulweni kwamafayela aku-inthanethi. Basiza abasebenzisi ngokufinyelela okulula futhi bakwazi ukuguqula i-MOV kumadivayisi we-MP4.
Kukhona umkhawulo we-50MB kuwebhusayithi. Abasebenzisi bangakhetha ifayela le-MOV kwi-PC yabo. Isebenza nazo zonke izinhlelo ezisebenzayo. Le webhusayithi imahhala ukuyisebenzisa.
Indlela engekho ku-inthanethi:
Kunezinketho ezimbalwa ezingaxhunyiwe ku-inthanethi ezitholakalayo kubasebenzisi futhi. Ungalanda isoftware yokuguqula yamafayela amakhulu. Kunezinketho ezimbalwa ezitholakalayo ezingabizi mali. Ake sibheke indlela yokuguqula i-MOV ibe yi-mp4 ngamafayela amakhulu. Lokhu kuzosebenzela ama-movie , Izinhlelo ze-TV , nokunye okuqukethwe. Nazi izinyathelo okudingeka uzilandele.
Isiguquli sevidiyo se-MOVAVI singenye yamathuluzi wokuguqula ividiyo athandwa kakhulu. Bebelokhu besiza abasebenzisi isikhathi eside. Isekela ukuguqulwa kwamavidiyo kunoma iyiphi ifomethi. Izosebenza ngokuzikhandla kumafayela wakho we-MOV ne-MP4. Abasebenzisi bangasebenzisa uhlelo lwe-MOVAVI ukuthola imiphumela emangalisayo.
Abasebenzisi kufanele bafake isoftware ku-PC yabo. Kuyindlela elula engathathi isikhathi esiningi. Kufanele wamukele yonke imigomo nemibandela. Isoftware ingalanda izinsiza ezengeziwe. Noma ngubani angaqala ukuguqula ngokushesha lapho ukufakwa sekuphelile.
Isoftware ye-MOVAVI izokusiza ukuguqula amafayela ngokushesha. Isebenza kalula futhi ayidingi mzamo omkhulu. Abasebenzisi bangazama ithuluzi lokuguqulwa kwabo okukhulu kakhulu. Sisebenzisa inguqulo yamahhala yohlelo lokusebenza. Kubuye kukhokhelwe ukusebenzisa ukusebenza kwabasebenzisi abanezidingo eziphakeme. Sincoma ukuthi uthenge uhlelo lokusebenza ukusetshenziswa isikhathi eside.
Isoftware ye-MOVAVI izogcina ngokuzenzakalela amavidiyo akho enkombeni. Abasebenzisi bangashintsha umkhombandlela ngokuya ngezidingo zabo.
Ezinye izindlela ze-MOVAVI:
Kunezinhlelo zokusebenza ezimbalwa ezihlukile ezikhona online. Abasebenzisi bangazama lokhu ukuthola umuzwa omuhle ungaxhunyiwe ku-inthanethi. Nazi izinketho eziphezulu ezidumile ku-intanethi.
I-Freemake ingenye yamathuluzi wokuguqula athandwa kakhulu. Sebesebhizinisini iminyaka engaphezu kweyishumi manje. Uhlobo lwamahhala lwesoftware alusekeli ukuguqulwa kwe-mov kuya ku-mp4.
Kuzofanele uthenge ukhiye wokwenza kusebenze ukuzama lesi sici. Akunasici ngokugcina ikhwalithi yevidiyo yakho iqinile. Abasebenzisi futhi bangacindezela kalula amavidiyo ngesoftware.
2. Ibhuleki lesandla
Ibhuleki lesandla lingenye yamathuluzi wokuguqula ividiyo athandwa kakhulu atholakala ku-intanethi. Kungumthombo ovulekile ngokuphelele futhi unikeza izici zokufaka ikhodi.
Siyincoma kuwo wonke umuntu ongenazinkinga ngesixhumi esibonakalayo somsebenzisi esiyinhloko. Kubukeka kuphelelwe yisikhathi ngenxa yesakhiwo esilula. Isoftware izokwenza umsebenzi wenziwe ngokunemba ngokweqile.
Lawa ngamanye amathuluzi amahle wokuguqula online. Abasebenzisi bangabazama ukuguqula i-mov ibe yi-mp4. Sithemba ukuthi umhlahlandlela wethu uphendula konke ukungabaza kwakho futhi akunikeze izinsiza ezanele. Yiba nesipiliyoni esihle sokubuka okuqukethwe nale nsizakalo.
ukubuyekezwa kwe-inthanethi kwama-movie
xbox 360 amakhodi womdlalo mahhala
iwebhusayithi ehamba phambili yokubuka ama-movie amasha mahhala
igama lomndeni le-whatsapp
bukela ama-movie amasha online manje
iphezulu kanjani i-movie yamahhala online
malini ukubhaliswa kwe-crunchyroll